प्रधानाध्यापकले मुक्का हानेर झारिदिए विद्यार्थीको दाँत ! | News Nepal
प्रधानाध्यापकले मुक्का हानेर झारिदिए विद्यार्थीको दाँत !
बाग्लुङ । प्रधानाध्यापकको कुटाइबाट एक छात्र घाइते भएका छन् । बाग्लुङ नगरपालिका वडा नं १४ नारायणस्थानस्थित गणेश माध्यमिक विद्यालयका प्रअ कृष्ण गौतमको कुटाइबाट कक्षा १० मा अध्ययनरत १६ वर्षीय कुशल पौडेल घाइते भएका हुन् ।
जिल्ला सदरमुकामा रहेको चिल्ड्रेन लाइफ बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ७ सम्म अध्ययन गरेका पौडेललाई राम्रो पढाई भएको भन्दै कक्षा ८ मा गणेश मावि लगिएको थियो । बाबु प्रेमप्रसाद शर्मा पौडेल पनि शिक्षण पेशामा छन् । “पठनपाठन राम्रो हुन्छ भनेर गणेश माविमा पठाइयो”, उनले भने “म पनि शिक्षक हो, विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्न पाइँदैन ।” ती शिक्षकविरुद्ध कानूनी उपचार बताउँदै पौडेलले कुशल खेलाडीसमेत भएकाले सामान्य चोटबाट उनी पीडित नहुनुपर्ने बताए । विद्यालयमा कुटपिट भएको विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकलाई समेत सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क भएन । सोही विद्यालयका एक शिक्षकले भने कुटपिट भएको बताए ।